आज वि.सं.२०७६ साल भाद्र ०२ गते सोमबारको राशिफल - Hotpati Media Houseआज वि.सं.२०७६ साल भाद्र ०२ गते सोमबारको राशिफल - Hotpati Media House
आज: | Sun, 22, Sep, 2019
आज वि.सं.२०७६ साल भाद्र ०२ गते सोमबारको राशिफल
२ भाद्र २०७६, सोमबार ०५:१८ मा प्रकाशित (1 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १० मिनेट
वि.सं.२०७६ साल भाद्र ०२ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१९ अगष्ट १९ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । वर्षा ऋतु । श्रीशाके १९४१ । भाद्र कृष्णपक्ष । तिथि चतुर्थी,४६ घडी २४ पला ,रातको १२ बजेर १० मिनेट उप्रान्त पंचमी । नक्षत्र उत्तरभाद्रपदा,३१ घडी ०७ पला,बेलुकी ०६ बजेर ०३ मिनेट उप्रान्त रेवती । योग धृति,२४ घडी ०९ पला,दिउसो ०३ बजेर १६ मिनेट उप्रान्त शूल । करण बव,बिहान ११ बजेर १८ मिनेट उप्रान्त वालव,रातको १२ बजेर १८ मिनेट उप्रान्त कौलव । आनन्दादिमा गद योग । चन्द्रराशि मिन । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ३६ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ३६ मिनेट । दिनमान ३२ घडी ३१ पला । पञ्चक ।
समय मध्ययम रहेकोले पढाई लेखाईमा भनेजस्तो प्रगति गर्न सकिनेछैन । खानपान तथा बाहिरी बाताबरणको ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ । माया प्रेममा धोका तथा बिश्वासघात हुनेछ । काम गर्दा ध्यान दिनुहोला दण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ । तापनि विदेशी सामानको व्यापार व्यावासय फस्टाएर जानेछ । लामो दुरिको यात्रा हुनेछ ।
कार्यक्षेत्रमा आलोचना गर्ने तथा फसाउँनेहरु सक्रिय हुनेछन् । व्यापारमा प्रशस्त समय दियमात्र आम्दानी हुनेछ । अग्रज तथा आफन्तहरुको असहयोगले राम्राकाम गर्ने अवसर गुम्नेछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला दण्ड तथा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । अध्ययनमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ ।
राजनिति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुका लागि जनताको समर्थन पाईने तथा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । व्यावसायमा लागनि बढाई मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने बिभिन्न अवसरहरुले पछ्याउनेछन् । प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पतिको प्रयोग गरि आए बढाउँन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ ।
काम तथा अध्ययनको शिलशिलामा लामो दुरिको यात्रा हुने ग्रहयोग रहेकोछ । प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने योग्य बरबधुको लगन गाठो बाधिने बलियो सम्भावना रहेकोछ । धार्मिक क्षेत्रको यात्रा हुने तथा धार्मिक प्रवचन सुन्ने अवसर जुर्नेछ । अध्ययनमा शुभचिन्तक तथा प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै राम्रो नतिजा हात पार्न सकिनेछ ।
कष्टभावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले खानपान तथा बाहिरी बाताबरणको ध्यान दिनुहोला । सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त भएपनि समयमा जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा आलोचना हुनसक्छ । लामो समयदेखिको प्रेम सम्बन्ध टुट्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । अध्ययनमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । तरपनि रिसर्च पर्सनका लागि समय उत्तम रहेकोछ ।
जीवनसाथिको सहयोगले राम्रा तथा उपलब्धिमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । बन्द व्यापार फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने तथा खोजिमुलक क्षेत्रबाट भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । सवारि साधन तथा बिलाशी सामान हातलागि हुने योग रहेकोछ ।
व्यापारको शिलशिलामा लामो दुरिको यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ भने व्यावसायमा लगानि गरि प्रशस्त नाफा कमाउँन सकिनेछ । अध्ययन,लेखन,कलासाहित्य तथा गित संगितमा चासो बढ्नेछ भने तपाईको प्रतिभाको उच्च कदर हुँनेछ । प्रेम सम्वन्धमा विश्वासको वाताबरण बढ्नेछ । भौतिक साधनहरु जुट्नेछन् प्रविधिको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
चिठ्ठा पर्ने तथा बिषेश मानिसबाट उपाहार पाईने अधिक सम्भावना रहेकोछ । वर्गिय हक हितका लागि गरिएका प्रयत्नबाट भनेजस्तो नतिजा आउँने हुँनाले मन प्रशन्न हुँनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धाको लडाईमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै परिवार तथा गुरुवर्गहरुका अगाडि प्रशंसा पत्र तथा पुरस्कार जित्न सकिनेछ भने तपाईको बौद्धिकतालाई सबैले सम्मान गर्नेछन् । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानिबाट लामो समय सम्म आम्दानि भईरहनेछ ।
समय तथा परिस्थितिसँग जुध्न नसक्दा अरुभन्दा पछि तपाईँको नाम आउँनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काममा आलोचना सहितको समर्थन प्राप्त हुनेछ । सस्कार तथा सस्कृति बिर्सनाले अग्रजहरु रिसाउनेछन् । मन परेको मानिस टाडिनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । सेवामुलक व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँनेछन् भने बिवाद तथा प्रतिष्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । लेखन कला तथा साहित्यमा बाकि रहेको कामलाई पूर्णता दिन सकिनेछ । प्रेम प्रशङमा रमाउँने चाहनेहरुला लागि समय उत्तम रहेकोछ । आट,शाहस तथा पराक्रमा बृद्धि भएर जाने हुनाले उपलब्धिमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ ।
ओजिलो बोलिको प्रभावले समाजमा सकारात्मक कामको थालनि हुँनेछ भने राजनितिक यात्रा सफल रुपमा अगाडि बढाउँन सकिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा तपाईको बलियो पकड रहने तथा कार्यक्षेत्रमा तपाईको कामको उच्च सम्मान हुँनेछ । प्रशंसकहरु बढ्नेछन् प्रेम बन्धनमा बाधिने गतिलो सम्भावना रहेकोछ ।
राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको कामगरि नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । राम्रो काम गरि परिवार तथा समाजमा गुमेको साख फिर्ता गर्ने समय रहेकोछ । अध्ययनमा समय लगानी गर्ने बिद्यार्थीहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ । व्यापारी,उद्योगी तथा कलाकारिता क्षेत्रमा समय खर्चनेहरुका लागी समयले राम्रा अवसर प्रदान गर्नेछ । प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ ।
आज वि.सं.२०७६ साल असोज ०५ गते आईतबारको राशिफल
आज वि.सं.२०७६ साल असोज ०४ गते शनिबारको राशिफल
भक्तपुरमा पाथीभरा मन्दिर
शुक्रबार महाकालीकाे पूजा गर्नु उत्तम
सिने स्टार अवार्ड २०२० क्यानडामा हुने
सन्दीप लामिछानेकाे टिम आइतबार राती गुएना अमेजन वारिवर्ससँग भिड्दै
असोज १० मा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक,नेविसंघ बारे छलफल हुने
एनआरएन कोरियाको अध्यक्षमा सुवेदी विजयी
टीकापुर घटनाका विषयमा छलफल भएको छ – अध्यक्ष दाहाल
चरम यौन सन्तुष्टि कहिले ?
साफ यू-१८ फुटबल च्याम्पियनसिप : नेपाल भुुुुटानसँग पराजित
कोरियाको दङदेमुन फेसन बजारमा आगलागी २ जना घाइते
कहाँ गए प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका विद्युतीय बस?
गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो
सिमेन्ट उत्पादक संघ फुटकाे संघारमा, दर्जन बढी साधारण सदस्यहरु संघबाट बाहिरिए
अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाएरै छोड्छु -सांसद बस्नेत
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा संबिधान दिवसको शुभकामना
होटेलमा व्यवसायी मृत फेला
काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ५ सय युवा परिचालन
मोबाईल मेलामा के एल मोबाईल डिजिटलको बम्पर अफर
आजदेखि दसैंका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला
२३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने
काठमाडौं - चीनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङ असोज २७ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। लामो समयको प्रतिक्षापछि चीनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन... विस्तृतमा
दक्षिण कोरिया र जापानविच वार्ता हुने
मोदीलाई आफ्नै एयरस्पेस प्रयोग गर्न दिन पाकिस्तानद्वारा अस्वीकार
कोरियन सिरियल किलरको पहिचान, अन्डरवेयरले खोल्यो यस्तो रहस्य
दक्षिण कोरियामा स्वाइन फ्लु भेटियो, हाइ अलर्टमा रहन राष्ट्रपतिको निर्देशन
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना, प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |